रामजी बलामी , असार ४, २०७३
स्वस्थ्य पर्यावरणीय वातावरणमा हाइकिङ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा पिकनिक स्पटको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने तपार्इंका लागि उत्तम गन्तव्य हुन सक्छ— मकवानपुरको टिष्टुङ बज्रवाराही ।
रामजी बलामी , फाल्गुन १४, २०७२
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक र अधिकृत स्तरका विभिन्न पदका लागि ५ सय १ जना कर्मचारी माग गरेको छ । प्राधिकरणले सहायक स्तरका विभिन्न पदका लागि ३ सय ९५ जना तथा अधिकृतस्तरका लागि १ सय ६ जना कर्मचारी माग गरेको हो ।
प्रहरी सेवामा ५ हजार ५ सय ४४ जनालाई अवसर
रामजी बलामी , माघ २४, २०७२
के तपाईं प्रहरी बनेर देशको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईंका लागि अवसर आएको छ । नेपाल प्रहरीले जनपदतर्फको प्रहरी जवान पदका लागि ५ हजार ५ सय ४४ जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
रामजी बलामी , माघ १४, २०७२
रामजी बलामी , माघ ४, २०७२
रामजी बलामी , पुस १९, २०७२